Eweli nju - China Ningbo enweghị
Principles Model PML adịgide Igwe Ọdụdọ Lifter nwere ike magnetik ụzọ emepụta site NdFeB magnetik ihe. On na Off nke magnetik ụzọ a na-achịkwa na-atụgharị akwụkwọ ntuziaka handle PML na-adịgide adịgide magnetik lifters nwere magnet ka ike, na-ebuli ike ga-mbà.
Na loading na ebutu, na lifter nwere ike ndoli ígwè / ígwè blocks, cylinders na ndị ọzọ na na magnetik ihe maka linkage nke njikọ. Ọ bụ nnọọ adaba maka ngwa na loading, ebutu, na-akpali akpali. PML na-adịgide adịgide magnetik lifters ndị kasị mma na-ebuli eweta maka ụlọ mmepụta ihe, docks, n'ụlọ nkwakọba na njem.
Ejighị ya kpọrọ na ji nkà ahaziri, mfe maka ngwa, ike magnetik Ndọrọ ike na mma na njikwa.
Open na Download ngwaahịa katalọgụ nke magnetik lifter
Previous: magnetik Chuck
Osote: ite nju
Lifter Igwe Ọdụdọ
n'ibuli Igwe Ọdụdọ
Igwe Ọdụdọ Lifter